(UPDATE 1) DAAWO – Dabaaldegga Sanad Guuradii 28aad Ee Jamhuuriyadda Somaliland Oo Maanta Si Habsami Ah U Qabsoomtay – Banaadir weyne
(UPDATE 1) DAAWO – Dabaaldegga Sanad Guuradii 28aad Ee Jamhuuriyadda Somaliland Oo Maanta Si Habsami Ah U Qabsoomtay
Hargeysa (WBW: The GBM) – Wararkka ka imaanaya Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa waxey sheegayaan in guud ahaan Dalka Somaliland maanta looga dabaaldeggay sanadguuradii 28aad ee ku aaddaneed maanta oo ay taariikhda tahay 18-dii Maajo, sanadka 2019-ka.
Warka wuxuu ku darayaa in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu jeediayay hadal ku aaddan Xuska 18-da Maajo ee sanadkan 2019-ka.
Mahaan hoose aa lagala socon karaa hadalka uu Madaxweyne Biixi uu maanta jeediyay, iyadoo laga soo qaatay Horn Cable TV.
18-dii Maajo, sanadkii 1991-dii ay eheed markii uu soo xirmay Shirkii Magaalada Burco uga socday Siyaasiinta, Oday Dhaqameedyada, Aqoonyahaanada iyo Halgameyaasha, waxaana ku xigtay in lagu dhawaaqo Jamhuuriyadda Somaliland; iyadoone dib looga noqday Midowgii 1-dii Luuliyo ee sanadkii 1960-kii.
Sideedaba, Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ay ka koobnaa jirtay 8 Gobol (Jubada Hoose, Jubada Sare, Banaadir, Hiiraan, Mudug, Bari, [Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed oo hada ah Somaliland ]) markii ay abuurantay 1-dii Luuliyo sanadkii 1960-kii; ayna wada dhiseen Wadaniyiintii Waqooyiga Soomaaliya (Former British Somaliland) iyo Wadaniyiintii Koofurta Soomaaliya (Former Italian Somaliland).
Markaasi waxaa Habka Federaaliga ah u ololeyn jiray Shiikh Cali Jimcaale Baraale, Cabdulqaadir Soobe, iyo Xaaji Baraako oo markaasi aad loo mucaaradi jiray.
15-tii Oktoobar, sanadkii 1969-kii waxaa dhacday in Madaxweynehii Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharma’arke lagu toogto Magaalada Laas Caanood, waxaana toogtay askari boolis ahaa oo magaciisa lagu sheegay Saciid Daashane Ismaaciil.
Shan maalmood kadib, waxaa la aasay Madaxweynehii Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharma’arke.
Waxaa xegtay in Taliyehii Xooga Dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Siyaad Barre, isagoo kaashanayo 19 sarkaal oo katirsanaa Ciidamada Xooga Dalka iyo 5 sarkaal oo katirsanaa Ciidamada Boliiska uu Taladii Dalka Soomaaliya uu xoog kula wareego tariikhda markey aheyd 21-dii Oktoobar sanadkii 1969-kii.
Kala qeybinta gobolada waa uu sii wadoo, ilaa uu ka gaarsiiyo 18 Gobol oo kusii saleeyay qabiil, iyada oo uu xukunka goboladana usii dhiibanayo kuwa ku taageersanaa taliskiisa kelitaliska ah; si dadbana usoo xulanayo kuwa diidan kelitalisnimadiisa.
Gobolka keliya ee uusan kala qeybin waxaa uu ahaa Gobolka Hiiraan oo ugu baaxad yaraa 8-dii gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
30 sano, 10 bilood iyo 17 maalmood kadib, waxaa Magaalada Burco looga dhawaaqay in Midowgii 1-da Luuliyo ee sanadkii 1960-kii dib looga noqday isla markaana ay abuurantay Jamhuuriyadda Somaliland taariikhda marki ay aheyd 18-dii Maajo, 1991-dii.
Maanta waxey Jamhuuriyadda Somaliland u dabaaldegeysaa sanadguuradii 28aad.
Weydiimahase waxey yihiin: 1. Ma jeclaan loo qabo baa Somaliland looga samri la’yahay? 2. Mase hilow loo qabo amar ku taagleynti, digdigashadi, dhacii, boobkii, xarigii, jirdilkii, toogashadii, iyo gumaadkii lagu haayn jiray Dadka Somaliland?
Hubaal waxaa ah in kuwa diidan Somaliland ay hilow u qabaan amar ku taagleynti, digdigashadi, dhacii, boobkii, xarigii, jirdilkii, toogashadii, iyo gumaadkii ay ku haayn jireen Dadka Somaliland.